नयाँ अध्ययन भन्छ- कोरोनाले श्रवण शक्ति नष्ट पारिदिन सक्छ ! – Makalukhabar.com
नयाँ अध्ययन भन्छ- कोरोनाले श्रवण शक्ति नष्ट पारिदिन सक्छ !
मकालु खबर	 २०७७ आश्विन ३० गते प्रकाशित 364
एजेन्सी । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । अहिलेसम्म यसको औषधि तथा खोप पत्ता लाग्न सकेको अवस्था छैन । नयाँ-नयाँ अध्ययनहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यस्तैमा एउटा नयाँ अध्ययनले नयाँ खुलासा गरेकाे छ । बेलायतको युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका अनुसन्धानकर्ताले काेराेना संक्रमितकाे श्रवण शक्ति जीवनभरीका लागि नष्ट पारिदिन सक्ने खुलासा गरेका हुन् । अध्ययन अनुसार काेराेनाकाे संक्रमणले सुन्ने क्षमतालाई कम वा पूर्ण रुपमा समाप्त पारिदिन सक्छ । बेलायतमा एउटा यस्तै घटना भेटिएको छ ।
एक ४५ वर्षीय पुरूषले काेभिड १९ संक्रमणपछि आफ्नो श्रवण शक्ति गुमाएका छन् । बेलायतका डाक्टरहरूले यो कोरोनाभाइराससँग जोडिएको पहिलो घटना भएकाे बताएका छन् ।
ती पुरूषलाई लण्डनकाे एक अस्पताल भर्ना गरिएकाे थियाे । श्वास लिन उनलाई गाह्राे भएपछि सघन उपचारका लागि सारिएकाे थियाे । काेराेना पुष्टि भएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखियाे । भेन्टिलेटरबाट निस्कने बेला उनले घण्टी हल्लिएकाे त देखे तर एउटा कानकाे अचानक श्रवणशक्ति हरायाे ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार संक्रमणपछि स्टेरोयड औषधी दिएपछि यसको असर नकारात्मक हुनसक्छ । यो बहिरोपनको रुपमा पनि देख्ने गर्छ । यद्यपी, बिरामीको श्रवण शक्ति कसरी घट्छ, यो पूर्ण रुपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । थुप्रै पटक फ्लू, हर्पिजजस्ता भाइरल संक्रमणको मामिलामा यस्तो हुनेगर्छ ।
अस्पताल भर्ना भएका ती बिरामीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै गएपछि उनलाई एन्टीभाइरल औषधी रेमडेसिविर स्टेरोइस दिइयो र रगत चढाइयो । यो उपचारपछि बिरामीले केही राहत पाए । केही दिनपछि बिरामीले दाहिने कानमा घण्टी बजेको जस्तो आवाज सुन्न थाले र अचानक यो कानले सुन्न छोडे । एकहप्ता पछि उनलाई आइसीयूमा ट्रान्सफर गरियो ।
बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टरले यसअघि कुनै पनि बिरामीको सुन्ने क्षमतामा असर नपरेको बताएका छन् । शारीरिक रुपमा ती बिरामी तन्दरुस्त छन् । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बिरामीको कानको परीक्षण गर्दा त्यसमा न त कुनै अवरोध थियो न नै कान सुन्निएको थियो । यो घटनापछि बिरामीको थुप्रै परीक्षण गरियो । यसमा फ्लू, रुमेटोयड अर्थराइटिस, एचआईभीको परीक्षण समावेश थियो । अनुसन्धानमा पाइए अनुसार बिरामीको बहिरोपनको कारण कोरोनाको संक्रमण थियो ।
वैज्ञानिकका अनुसार कोरोनाले कानमो मध्ये भागलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । यो भाइरसले शरीरमा यस्तो रसायन बढाउने गर्छ जुन सुन्ने क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताले डाक्टरलाई आइसीयूमा कोरोनाका बिरामीसँग कुरा गर्दा उनीहरुको श्रवण शक्तिबारे पपिन कुरा गर्न सुझाएका छन् ।
बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘हामी त्यस्तो अनैतिक हुन सक्दैनौं’